पहिलो सन्तानको प्रतिक्षामा गरिमा, शेयर गरिन् बेबी बम्प ! – Ktm Dainik
पहिलो सन्तानको प्रतिक्षामा गरिमा, शेयर गरिन् बेबी बम्प ! - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
झोला बाहेकका अन्य फिल्महरुले करिअर चम्काउनुको साट्टो झन फुर्सद बनाउन थालेपछि उनले बेल्जियमका धनाड्य नेपाली यूवक हरि शर्मासँग विवाह गरिन् ।
एक्कासी बेल्जियममा गरिमाले हरि शर्मासँग विवाह गरेको खबर बाहिरिँदा उनका प्रशंसकहरु एकपटक त दंगै परेका थिए तर फिल्म करिअर ओरालो लाग्न थालेपछि सायद गरिमाले यसको विकल्प भेटिनन् ।
अहिले उनको पहिरन हेर्दा दर्शकको होस उड्छ । विवाहपछि पहिरनमा खुलेकी गरिमाको शरीरमा अहिले वान पिसले समेत ठाउँ पाउन थालेका छन् ।
यसैक्रममा पछिल्लो समयमा भने उनी गर्भवती छन् । उनले केहि समयदेखि बेविबम्पका तस्बिर सामाजिक संजालमा शेयर गरिरहेकी हुन्छिन् । उनका तस्बिरले निकै चर्चा पाउने गर्छिन् ।
यसैक्रममा उनका पछिल्ला तस्बिरले निकै चर्चा पाइरहेका छन ।